Irina Shayk anoita 'Scandal muParis' mumutauro we2019 Jean Paul Gaultier - TELES RELAY
HOME » mwe »Irina Shayk achiita 'Kupisa muParis' mu 2019 Jean Paul Gaultier ad
Irina Shayk achiita 'Scandal muParis' mune 2019 Jean Paul Gaultier ad
La 2019 pub in black and white itsva perfume 'scandal in Paris' de Jean Paul Gaultier nyeredzi yakakurumbira yeRussian model Irina Shayk iyo inonyadzisa nechishuvo chake chema sexy mune manheru emagariro evanhu. ari pub music ndiro zita "Waltz" of Aram Khachaturian.
Iyo itsva 2019 pub yeJean Paul Gaultier zvinonhuhwirira "Scandal muParis"
Kukurudzira kwake chinonhuwira chitsva 'Scandal muParis'Jean Paul Gaultier akakurudzira kumuzinda wekuRussia unozivikanwa Irina Shayk. Mufirimu ine mutsvuku uye yakachena, iyo yakanaka brunette akashamiswa nehombodo yake sezvaanosvika mune manheru emagariro eParis.
Akangopfeka mu tuxedo jacket uye heel heel, achisiya kuonekwa yake makumbo uye chirairo chake. Ushingi husati huri kutambirwa kwevose vashanyi vanochema kuchema. Irina Shayk haisi kuratidzika kutyisidzirwa uye kunokanganisa kuchenjera kwekutarisa kwake woman fatale. Uyu mukova unoshamisa unonyengedza, asi Jean Paul Gaultier uyo anodanidzira "Ndinoda kutyisa uku" apo mukadzi akanaka akagara asinganyatsonzwisisi patafura yake.
Rumor rine icho kuti Jean Paul Gaultier akadzoka nechinangwa chitsva. Mukadzi wekunhuhwirira, kure nechekucheka, kumukadzi ane simba uye ane chirikadzi. Itai kuti iwe uedzwe nemugwagwa unojeka uye unobwinya weScandal A Paris uye unotanga makuhwa anonyanya kukurumidza ...
Irina Shayk: anonyadzisa chiso chitsva chaJean-Paul Gaultier
Iwe unoshamisika ndiani ndiye akanaka musikana musikana mune iyi pub JPG? Kuti atange kunhuhwirira kwake mutsva, Jean-Paul Gaultier akaisa maonero ake pane imwe the sexiest models kubva panyika: Irussia Irina Shayk (Irina Chaikhlislamova wezita rake chaiye). ari top model inotsivawo saizvozvo the old muse Vanessa Axente uyo akatora zvinonhuwira makore maviri akapfuura. Uye nokuda kwekuzivisa izvi, the woman fatale akanga akakwanisa kufurudzira unhu hwake kunyanya sexy uye rakasununguka !
Uye zvishoma zvatinogona kutaura ndeyokutiex girlfriend waCristiano Ronaldoakasarudza mukadzi akanaka kwazvo munyika yose mu 2011 nemagazini FHM isingazikamwi kuvanhu vose uye kumusoro kwayo 33 nevaTire. Iko mu2007 iyo inozvizivisa kuburikidza nekubudisa pachena mapuropa ake epurasitiki kumagazini yeAmerica yemagazini Sports Illustrated iyo yaanovhara mu 2011.
Inofungidzirwa se supermodeliye anogara aripo imwe yemagazini yemafashoni iyo yakakurumbira. Aivawo neropafadzo yekushanda pamwe chete makuru makuru pamwe, pakati pevamwe, L'Oreal, Intimissimi, Victoria Secret, Agent ProvocateurBeach Bunny, Replay, Guess, Versace, GivenchyMarc Jacobs Zvakanaka kana Burberry ...
Ndeipi mimhanzi yebhuku?
La classic music of the pub 2019 zvinonhuwira Jean-Paul Gaultier "Kupisa muParis" ndiro zita "Waltz" wemunyori we classical music Aram Khachaturian. Chikamu chakabviswa kubva anoedzeseranziyo yemutambo yakanyorwa mu1941 naAram Khachaturian nokuda kwechitamba chemwechetewo naMikhail Lermontov.
Aram Ilich Khachaturian is a Soviet muimbi weArmenian akatangaakaberekerwa 24 May 1903 muTbilisi (Georgia) ndokufa 1er May 1978 muMoscow. iye akazvisimbisa seumwe we "vakuru" vanyori veSoviet Union. Unhu hwake hune rupo uye unyanzvi hwokugadzira hunogona kuwanikwa mumabasa akadai seGayaneh - uye Swend Sword Dance - uye Spartacus.
Irina Shayk ari kuita 'Scandal muParis' mumagazini inonzi 2019 perfume Jean Paul Gaultier
4.7 / 9 vhoti [va]
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://teles-relay.com/2019/05/17/irina-shayk-fait-scandal-a-paris-dans-la-pub-2019-jean-paul-gaultier/
MHURI YEMAGWARO: Cameroon semuenzaniso
VIDEO. Akanga ari anonyangadza: Pierre-Jean Chalençon akashandurwa neArain Delon panguva yake
VANHU & VANHU3,565
TECH & TELECOM1,990